Welcome to RealTaleex.com | Archive | Wararka
Muqdisho:-(RT)Ra’iisul wasaare kuxigeenka ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga Marwo Fawsiya Yuusuf Xaaji Aadam oo maanta dalka dib ugu soo laabatay ayaa ka hadashay socdaalkii ay ku joogtay muddooyinkan Magaalada Nairobi. Marwo Fawsiya ayaa dalka ka maqneyd tan iyo markii ay ka qeybgashay hirkii Caalamiga ah ee ku qabsoomay Magaalada London 7-dii May, kuna [...]
Muqdisho:-(RT)Wasaarada war faafinta dawlada Federaalka Somaliya oo ka jawaabrat hadaladii kasoo yeedhay jabhada gooni doonka ah ee katalisa qaar kamid ah gobolada woqooyiga Somaliya,wasaarada ayaa ugu horeyn raali gelin ka bixisay hadaladii ka soo yeedhay jamhadaasi oo ay kamid ahaayeen Qaramada midobey ayaanu hawadayada u diidaynaa. Hoos ka akhro war saxaafadeedka.
Continue reading …	Maalinta nadaafada oo laga xusay dunida dacaladeeda(Sawiro)
Taleex:-(RT)Waxaa maanta dacalada caalamka laga xusay maalinta nadaafada gobolada Khaatumo,magaalooyinka l sida weyna looga xusayna waxaa kamid ah,Taleex,Laascaanood,Buuhoodle,Nairobi,Kampala,Minnesotta IWM. Hoos kadaawo Sawirada jiraaa Realtaleex News Desk.
Continue reading …	Sarkaal ka tirsan ciidanka Kenya oo lagu dilay magaalada Wajeer
Nairobi:-(RT)Wararka iminka naga soo gaadhaya magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dil loo gaystay sargaal katirsan ciidamada amaanka Kenya. Dolka Sargaalkan ayaa wararku sheegayaan in lagu dilay badhtamaha magaalada, waxaana dilkiisa loo adeegsaday rasaas sida uu sheegay qof kamid ah dadka deegaanka oo nala hadlay. “Dilka daqiiqado kahor [...]
Continue reading …	Wafdigii IGAD oo la kulmay madaxweyne Axmed Madoobe
Kismayo:-(RT)Wafdiga oo uu hoggaaminayo xog-hayaha guud ee urur-goboleedka IGAD, Maxbuub Macallin ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo waxay kulan hal saac qaatay kula yeesheen madaxweynaha cusub ee maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo ku xigeenkiisa, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyo saxiixayaasha maamulka Jubbaland. Ilaa hadda si rasmi ah looma oga qodobbada ay uga [...]
Continue reading …	Xildhibano dawladu iska hortagtay kunkoodii oo kahadlay(Video)
Muqdisho(RT)Kadib markii Maleeshiyaadka Barbaarta Gaashaaman ee ka amar qaata Xassan Culusow ay hor istaageen Xildhibaano Mooshin ka keenay Ra’isal Wasaaraha Fadhiiska ah iyo Madaxweynaha ay madax Martay qabyaalda Qaawan kaas oo Xildhibaanadu uga baqeen in uu Dalka Somalia ku celiyo Dagtaalo Sokeeye oo hor leh. Realtaleex News Desk.
Continue reading …	M.Xasan”Dadka reer-woqooyi candhuuftooda dib ha’uliqeen” midnimadu waa muqadas
Muqdisho:-(RT)Madaxweynaha Somalia, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horreysay ka hadlay arrimaha ka taagan Jubbooyinka, isagoo sheegay in waxyaabaha ka taagan ay qayb ka yihiin waxyaabihii ay muddada ka digaysay dowladda. Sidoo kale, Xasan Sheekh ayaa ka hadlay Somaliland, isagoo xusay in midnimada Soomaaliya ay tahay mid muqadas ah, loona baahan yahay in shacabka ku [...]
Continue reading …	Madaxweynaha Khatumo oo Magacabay Taliye&Abandulayaal
Taleex:-(RT)Xafiiska Madaxwaynaha Dawlad Goboleedka Khaatumo State ayaa waxaa ka soo baxay wareegto lagu Magacaabay Tilayaha Ciidamada Xoogaga Khaatumo State iyo laba Abaan Duule. Maadaxwayne oo isagu hada talada maamulka khatumo state hada gacanta ku haya ayaa isagu wada sidii maamulkaas la iskugu dubaridi lahaa. waxaana socoda wadatashi xoogan oo dhinac kasta ah. Dhinac kale raga [...]
Continue reading …	Golaha Wasiirada oo ansixiyay Hindise Sharciyeedyo(Sawiro)
Muqdisho:-(RT)Golaha Wasiirada ee Xukuumada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii joogtada ahaa, waxaana shirkan guddoominayay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid”. Golaha ayaa maanta ansixiyay Hindise Sharciyeedyo gaaraya 8 una gudbiyay Baarlamaanka, waxayna kala yihiin Hindise sharciyeeda: 1. Guddiga Dib-u-eegida iyo Hirgelinta Dastuurka. 2. Xafiiska Gardoonka iyo Illaaliyaha Dadweynaha. 3. Dhismaha [...]
Continue reading …	Xildhibaanada oo loo qeybiyay mooshin lagu rido xukuumadda (Original Document S.Parliament)
Muqdisho:-(RT)Fadhigii Baarlamaanka ee maanta ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa Xildhibaanada loogu qeybiyay mooshinka ka dhanka ah xukuumadda, kaasoo ay soo gudbiyeen Xildhibaanada qaar. Kulankii maanta ayaa waxaa shir guddoonimanayay gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Golaha Baarlamaanka Mahad Cabdalla Cawad waxaana looga hadlay ajandeyaasha kala ah, ka mid noqoshada Baarlamaannada Caalamka oo xildhibaanada ay ansixiyeen, [...]
Continue reading …	Page 1 of 238123Next ›Last »	Home